Jeneraly Rakotomahanina Florens : «Lainga ny filazana fa nisy voatifitra tany Anjozorobe» | NewsMada
Jeneraly Rakotomahanina Florens : «Lainga ny filazana fa nisy voatifitra tany Anjozorobe»
Nilaza ho nanao fanadihadiana manokana, tany an-toerana, mikasika ny “Raharaha Anjozorobe”, ny fibaikoana ny zandarimariam-pirenena Analamanga. Omaly, nanambara ny jeneraly Rakotomahanina Florens, fa “lainga ny filazana fa hoe nisy olona voatifitra na naratra tamin’iny raharaha iny”.
“Tsy nahita faty olona, na naratra izahay! Manoloana ny resaka mandeha ny amin’ny raharaha Anjozorobe, filazana fa misy faty olona tany an-toerana, nandray fepetra manokana ny fibaikoana ny zandary eto Analamanga nanao fanadihadiana manokana”, hoy ny Jly Rakotomahanina Florens, lehiben’ny CIRGN Analamanga, omaly nandritra ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety, teny Ankadilalana. Nanizingizina mihitsy ny jeneraly ary mbola nohamafisin’ireo iraka nandeha tany Anjozorobe, fa tsy nisy faty olona, na diana ra, na hoe olona naratra, araka ny nivoizan’ireo nanao valan-dresaka tamin’ny gazety etsy sy eroa. “Fialana amin’ny resaka miely no antony nandehananay tany an-toerana, ary nahim-ponay tanteraka fa tsy nisy naniraka, mba ahafahana mamantatra ny tena marina sy mandray fepetra”, hoy ny fanazavana ihany.
Nilaza ny Jly Florens sy ny kolonely Ravoavy Zafisamabatra, lehiben’ny Emmo/Reg, fa tsy mihitsy hatreto ny fitoriana na filazana olona very na naratra tonga tao amin’izy ireo, na tany amin’ny zandary tany Anjozorobe. Tsy nisy razana na naratra nentina ihany koa tany amin’ny hopitaly.
“Olona maro no nohadihadiana, na ny zandary tany an-toerana, na ny miaramila, na ny fokonolona, na ireo olona nesorina tamin’ilay toeram-pitrandrahana. Tonga hatrany amin’ny 15 km manodidina izahay, fa tsy nisy nahitana na nilaza momba ny olona maty voatifitra”, hoy ny kolonely Ravoavy Zafisambatra, iraka manokana.
Naheno poa-basy ny zandary
Nilaza kosa anefa, ireto mpanao valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety fa naheno poa-basy ireo zandary niaraka tamin’ny vadintany tany an-toerana, ny 23 febroary lasa teo. “Rehefa niala 30 mn teo amin’ilay toeram-pitrandraham-bato ny zandary sy ny vadintany namita iraka tany, naheno poa-basy tokoa, saingy tsy fantatra izay nanao izany”, hoy ny fanazavan’ny Jly Florens. Naheno io poa-basy io avokoa ny manodidina rehetra ary samy nanamarina fa nisy, saingy samy nilaza fa tsy nahita izay nanapoaka izany ny rehetra.
Ireo zandary niaraka tamin’ny vadintany izay nanatanteraka didim-pitsarana ny amin’ny hanalana ireo mpitrandraka ao an-toerana. “Zandary fito niaraka tamin’ny vadintany tamin’izany, ka rehefa tsy nety niala ny sasany tamin’ireo, niala izy ireo, ary efa nahazo baiko ireo tsy ampiasa hery”, hoy ny Jeneraly.
Raha ny filazana ny momba ny zanaky ny filoham-pirenena sy ny mpiambina azy ho nahavita ilay tranga mahabe resaka, nilaza ny zandary fa rehefa nanao fanadihadiana, tsy nisy nanamarina izany na iray aza. “Tsy mbola nisy nahita ny zanaky ny filoha ka sahy nilaza fa io izy. Olona roa sy zandary fito no tany an-toerana ary voamarina izany. Mandeha kosa ny fanadihadiana momba ny poa-basy”, hoy ny fanamafisana.
Nilaza ny tsy hihemotra ireo Antandroy
Na eo aza anefa izany fanambaran’ny zandary izany, nilaza ny tsy hihemotra ireo Antandroy. « Hiditra any amin’ny toeram-pitrandrahana izahay ary hitady ny fatin’ny zanakay na hisy inona na hisy inona », hoy i Tsimiondra Tomasy tetsy Andrefan’Ambohijanahary, omaly, nanoloana ny mpanao gazety. Mbola nanamafy izy ireo fa maty notifirina ao amin’izany toerana izany ny zanak’izy ireo.
Mpanao politika efa fantatra amin’ny nataony…
Tsiahivina fa notronin’ireo mpanao politika efa fantatra, amin’ny tantarany sy nataony teto amin’ny firenena, izany valandresaka izany. Naloam-bahoaka sy tsy sahy niatrika fifidianana ny sasany amin’izy ireo. Na koa mpijapy ireo hetsika na fitakiana samihafa miseho eto amin’ny firenena. Vao mainka manaratsy endrika sy manamaimbo ny hetsika sy fitakiana madio ataon’ireo mitonona ho Antandroy ny fifanotronana tahaka izao.
Etsy andaniny, tsy mbola nilaza ny heviny manoloana ity “Raharaha Anjozorobe” ity ny Praiminisitra Ravelonarivo. « Tsy mbola fotoana tokony hamaliana izany izao. Isika olon’ny fihavanana. Izahay tsy nahita na tena naheno io raharaha io ka sarotra amiko ny hamaly anareo aloha », hoy izy teny Mahazoarivo omaly, tamin’ny mpanao gazety.
2 r&eacuteponses à "Jeneraly Rakotomahanina Florens : «Lainga ny filazana fa nisy voatifitra tany Anjozorobe»"
mahatsangy no àry 06/03/2016 à 14:22
Messieurs les détenteurs du pouvoir !
No prenz pas le peuple comme “les cabards du bon Dieu !”
RAKOTOZAFY Jean Paul Emile 02/05/2016 à 01:56
AVELAO HIVELONA AMIN’NY HARENIN’NY FIRENENY NY GASY. LOVAN-DRY ZAREO TAMIN-JANAHARY IZANY NA DIA GALLIENI SY NY FANJANAHAN-TANY AZA TSY MBOLA NAMPAHORY NY GASY TOY IZAO. MITSANGANA RY MALAGASY NY FITSARANA TSY ANTENAINA NY ZANDARO SY MIARAMILA HERIM-PAMORETANA.TSY MISY ANTENAINA AMINY.. ZANAHARY TSY ANDRINAREO RY
MPITONDRA ANDRIN’NY VAHOAKA MADINIKA